AmaMonsoon: ayini, akhiwa kanjani futhi iyini imiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake wezwa izimvula. Leli gama livela egameni lesi-Arabhu mausim y kusho isizini. Lolu hlobo lwegama lubhekisa enkathini lapho imimoya ihlehliswa olwandle oluphakathi kwe-Arabia ne-India. Ukubuyiselwa emuva kwale mimoya nezinguquko zonyaka kubanga izimvula eziningi ezifundeni ezinezimo ezishisayo nezinomswakama. Lezi zimvula ezinamandla zidala umonakalo nezinhlekelele ngesilinganiso esiyinhlekelele.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngezimvula, izici zazo nokuthi zenzeka nini.
1 Yini ama-monsoons
3 Izinhlobo zemonsoons
4 Imiphumela elimazayo
Singasho ukuthi izimvula ezinkulu Yizinguquko ezinkulu imimoya enazo endabeni yokuqondisa ezenza zivuthe ngamandla ziqonde esifundeni. FUTHILokhu kwehluka kwezinguquko esiqondisweni somoya kuya ngesizini yonyaka. Le yindlela esibhekana ngayo nezinguquko zonyaka ezibhekele imvula eningi ezifundeni ezinezimo ezishisayo nezinomswakama.
Izindawo lapho imvula itholakala kakhulu eNingizimu naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Kungenzeka futhi nakwezinye izindawo zomhlaba ezifana ne-Australia, West Africa kanye neMelika imbala.
Uma sihlaziya imvula ngendlela ebanzi futhi ejule kakhulu, singasho ukuthi kungenxa yomphumela oshisayo obangelwa umehluko okhona phakathi kokufudumala kwenqwaba yomhlaba nolwandle. Uma sifika ezindaweni ezishisayo siyabona ukuthi izimvula ziletha umswakama omncane impela futhi zenze izinkathi zonyaka zome. Kunezinhlelo eziningana zemvula emhlabeni. Izinkathi zonyaka lapho lezi zimvula zenzeka khona ziyahlukahluka. Isibonelo salokhu sisibona enyakatho ye-Australia. Kule ndawo, isikhathi semvula siqala ngoDisemba kuya kuMashi.
Ngakolunye uhlangothi, endaweni yaseNdiya naseningizimu-mpumalanga ye-Asia sinezimvula zasehlobo nezimvula zasebusika, ezithonya kakhulu isimo sezulu. Lezi zimvula ziwumphumela womehluko wokushisa okukhona phakathi komhlaba nolwandle. La mazinga okushisa ayahluka ngenxa yesenzo semisebe yelanga.
Sizohlaziya ngendlela eningiliziwe ukuthi yiziphi izimbangela ezinkulu ezakha izikhukhula. Njengoba sishilo phambilini, ngumehluko emazingeni okushisa akhona phakathi komhlaba nolwandle ngenxa yokushisa okunikezwa yimisebe yelanga. Kokubili umhlaba namanzi asolwandle anesibopho sokumunca inani elikhulu lokushisa kodwa ngezindlela ezihlukile. Indlela yokumunca ukushisa incike kumbala wendawo ngayinye. Ngesikhathi esifudumele, ubuso bomhlaba buyakwazi ukufudumala ngokushesha kunamanzi. Lokhu kudala isikhungo sengcindezi ephansi emhlabeni kanye nesikhungo sokucindezela okukhulu olwandle.
Uma sibheka amandla emimoya, siyabona ukuthi imimoya ijikeleza isuka ezindaweni lapho kunengcindezi enkulu iye lapho kunengcindezi encane. Umehluko phakathi komhlaba namanzi waziwa njenge-gradient yengcindezi. Ngokuya ngenani le-gradient yengcindezi, isivinini lapho umoya uzosuka khona usuka endaweni enengcindezi ephezulu kakhulu uye kuleyo ephansi kakhulu izoshesha. Lokhu kubangela imimoya ephezulu yejubane. Ngakho-ke, nathi sinesiphepho esibi kakhulu.
Kuzo zonke izimo, noma ngabe yiluphi uhlelo lwemvula, imimoya ivunguza ivela olwandle lapho kunezinkulumo ezinkulu ezweni elifudumele lapho kunengcindezi encane. Lokhu kuhamba komoya kubangela ukuthi kuhudulwe inani elikhulu lomswakama ovela olwandle. Yile ndlela imvula eningi futhi evame ukuvela ngayo kusukela umoya onomswakama uphuma bese ubuyela olwandle. Ngemuva kwalokho ihlala ebusweni bomhlaba bese iyaphola futhi inciphise amandla ayo okugcina amanzi.
Singakwazi ukuhlukanisa imvula ehlukene ngokuya ngezimbangela eziyinhloko. Izindlela eziyinhloko ezakha izinhlobo ezahlukene zemvula zimi kanje:
Umehluko phakathi kokushisa nokupholisa akhona phakathi komhlaba namanzi.
Ukuphambuka komoya. Ngoba umoya kumele uhambe amabanga amade uthinteka yi umphumela we-coriolis. Lo mphumela ubangela ukujikeleza komhlaba kuphambukise imimoya enyakatho Nenkabazwe ngakwesokudla bese ikhukhuleka ngakwesobunxele enkabazwe eseningizimu. Kungokufanayo nangemisinga yolwandle.
Ukushintshaniswa kokushisa namandla Kwenzekani njengoba amanzi eguquka kusuka ketshezi abe yi-gaseous kanye ne-gaseous kuya esimweni samanzi nakho kunikeza amandla anele ukudala imvula enkulu.
Sazi kahle kamhlophe ukuthi imvula yase-Asia yaziwa kakhulu emhlabeni. Uma siya eningizimu, isikhathi semvula siqala ezinyangeni zika-Ephreli kuya kuSepthemba. Kule ndawo yeplanethi yethu kufanele sinake ukuthi imisebe yelanga incipha ime mpo phakathi nezinyanga zasehlobo. Lokhu kusho ukuthi imisebe yelanga ifika ngendlela ethambekele kakhudlwana, okushisa kakhulu umhlaba. Ngale ndlela, umoya oshisayo uyakhuphuka futhi wakhe indawo yengcindezi ephansi phakathi kwe-Asia emaphakathi. Okwamanje, amanzi oLwandlekazi i-Indian ahlala ebanda kakhulu futhi angumthombo wezindawo ezinengcindezi ephezulu.
Uma sihlanganisa indawo enengcindezi ephansi ye-Asia Ephakathi nendawo enengcindezi enkulu yoLwandlekazi i-Indian, sine-cocktail ephelele yokwakha imvula enkulu. Yebo kufanele usho lokho e-Asia imisebenzi eminingi yezomnotho incike enkathini yezimvula. Akumele sikhohlwe ukuthi imvula ilungele isivuno.
Omunye wemiphumela eqondile kakhulu imvula enayo ubuningi bemvula. Njengoba kunesilinganiso sokushisa okuphezulu kangaka, kwakheka izimvula ezinamandla eziholela ezikhukhuleni nasodakeni oluqubuka njalo olubhekele ukubhujiswa kwezakhiwo zasemadolobheni nezasemakhaya. Lokhu kulimala kubanga nokufa kwabantu.
Njengoba bekulindelekile, Izimvula nazo zinohlangothi lwazo oluhle. Futhi izindawo eziningi zase-Asia zinemisebenzi yazo yezomnotho ngokususelwa enkathini yezimvula. Abalimi bathembele ezimvuleni zemvula ukuze kukhule irayisi. Kuzuzisa nalabo abatshala izitshalo zetiye kanye nemifudlana evuselelwa kabusha.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezimvula ezinkulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » AmaMonsoon